Huawei သည် Mate9ကိုမူရင်းအရောင်နှစ်မျိုးဖြင့်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည် Androidsis
ဟိုဆေး Alfocea | | Huawei
လက်ကိုင်ဖုန်းကုမ္ပဏီကြီးဖြစ်သည့် Huawei သည်လက်ရှိတွင်အခွင့်ထူးခံပထမနေရာတွင်ရှိသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ထိပ်တန်းစမတ်ဖုန်းအမှတ်တံဆိပ်၂၀၁၇ ခုနှစ်ပထမသုံးလပတ်အတွင်း ၂၁ သန်းတင်ပို့ရောင်းချနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည် ၎င်း၏အောင်မြင်သောစမတ်ဖုန်းဖြစ်သော Huawei Mate9အမျိုးအစားအသစ်နှစ်မျိုး.
ထို့ကြောင့် Huawei Mate9သည်တစ်ခုအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည် အကောင်းဆုံးဘက်ထရီစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အတူစမတ်ဖုန်း၎င်းသည်အကြီးမြတ်ဆုံးအမျိုးမျိုးရှိသောဆိပ်ကမ်းများအနက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခုအသုံးပြုသူများသည်၎င်းတွင် ၀ ယ်နိုင်သည် Agate အနီရောင် y Topaz အပြာရောင် တရုတ်နိုင်ငံတွင်မေလ ၁၄ ရက်မှစတင်သည်။ ကျန်ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုမပြောင်းလဲပါ။
1 Huawei သည် Mate9မျိုးကွဲများကိုအားဖြည့်သည့်အရောင်နှစ်မျိုးဖြင့်အားဖြည့်သည်
Huawei သည် Mate9မျိုးကွဲများကိုအားဖြည့်သည့်အရောင်နှစ်မျိုးဖြင့်အားဖြည့်သည်
Huawei Mate9ဖြစ်လာသည် အအောင်မြင်ဆုံး Android စမတ်ဖုန်းတစ်ခု အခြားမော်ဒယ်များ၏အကူအညီဖြင့်တရုတ်နိုင်ငံရှိစမတ်ဖုန်းများကိုအများဆုံးရောင်းချသည့်ထုတ်လုပ်သူအဖြစ်တရုတ် Oppo မှကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစျေးကွက်ဖြစ်သည့်၎င်း၏ထုတ်ကုန် ၂၁ သန်းကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ယခုနှစ်ပထမသုံးလအတွင်းတင်ပို့
ထို့အပြင် Huawei Mate9သည် အများအပြားပရီမီယံ features တွေနှင့်အတူ Mid-range ကို terminal ကို အရာကြိုက်နှစ်သက်ခြင်း, တွေအများကြီး, ဝေဖန်သူများနှင့်အသုံးပြုသူများသည်။ ၎င်း၏အားသာချက်တစ်ခုကတော့၎င်း၏ဘက်ထရီဖြစ်သည် ၎င်းသည် ၄၀၀၀ mAh နှင့်အတူစျေးကွက်တွင်စွမ်းဆောင်ရည်အများဆုံးပေးသောတစ်ခုမဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည် အကောင်းဆုံးပြန်၏ခြောက်နာရီအားပြင်းထန်စွာအသုံးပြုခြင်းနှင့် ၁ ရက်ခွဲခွဲ ၂ ရက်အကြားကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုပုံမှန်အသုံးပြုခြင်းဟုခေါ်သည့်အရာအတွက်တစ်ခုတည်းသောအားဖြင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရရှိခြင်းသည်အလွန်ဆွေမျိုးဖြစ်သည်။
မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သောအောင်မြင်မှုသမိုင်းနှင့်အတူ Huawei သည်၎င်း၏သုံးစွဲသူများနှင့်အထူးသဖြင့်၎င်း၏အလားအလာရှိသောသုံးစွဲသူများကိုနှစ်ခြိုက်စေရန်ဆက်လက်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ Huawei Mate9၏ချောချောမွေ့မွေ့စာရင်းကိုချဲ့ထွင်ရန်၊ အကယ်၍ သင်လိုချင်လျှင်၎င်းကိုပြီးအောင်လုပ်ရန်သင့်အားတားဆီးပေးသောအချက်သည်မဟုတ်ပါ။.
လာမည့်မေလ ၁၄ ရက် (တနင်္ဂနွေနေ့) အနေဖြင့် Huawei Mate9ကိုအပြီးသတ်အသစ်နှစ်မျိုးဖြင့်ရရှိနိုင်သည် Agate အနီရောင် y Topaz အပြာရောင်, အရ သတင်းအချက်အလက် Play Full Droid မှတင်ပြသည်။ ယခုအချိန်တွင် ဤဆိပ်ကမ်းများ၏ရရှိမှုကိုတရုတ်နိုင်ငံတွင်သာကန့်သတ်ထားမည်အခြားစျေးကွက်များသို့ချဲ့ထွင်ခြင်းကိုမူတားမြစ်ထားခြင်းမရှိသော်လည်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရောင်းချသူများမှတစ်ဆင့်ဤနှင့်အခြားထုတ်ကုန်များကိုရယူရန်အခြားနည်းလမ်းများလည်းရှိနေသည်။
Huawei Mate9သည်စျေးကွက်၌နောက်ဆုံးပေါ်တိုးတက်မှုတစ်ခုမဟုတ်သော်လည်း၎င်းကိုလွန်ခဲ့သောနှစ်ဝက်နီးပါးကတရုတ်အီလက်ထရွန်းနစ်ကုမ္ပဏီမှစတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။
Huawei Mate9သည်အလွန်ကောင်းမွန်သည် ၅ လက်မ Full HD မျက်နှာပြင် ၎င်းကို phablet အမျိုးအစားတွင်သာမကအစွမ်းထက်သောနေရာတွင်ထားရှိသည် 4.000 mAh ဘက်ထရီ နှင့် Kirin 960 octa-core ပရိုဆက်ဆာ။ ၎င်း၏အထင်ရှားဆုံးအင်္ဂါရပ်များနောက်တစ်ခုမှာ၎င်း၏ဖြစ်သည် 20 megapixel နှင့် 12 megapixel Leica dual main ကင်မရာကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Alfonso de Frutos ပြသထားသောဓာတ်ပုံများကဲ့သို့အထင်ကြီးလောက်သောဓာတ်ပုံများကိုရိုက်ယူနိုင်သည် ဒီအလွန်ရေးစပ်ပြန်လည်သုံးသပ် လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကမှ။ စဉ်တွင် ရှေ့ကင်မရာသည် 8 megapixel sensor ကိုထည့်သွင်းထားသည် အရည်အသွေးမြင့် selfies ယူရန်။
ဤနှင့်အခြားအင်္ဂါရပ်များ၏ကျေးဇူးကြောင့် Huawei Mate9သည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်စျေးကွက်၏အကောင်းဆုံးဆိပ်ကမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ စိတ် ၀ င်စားသော ၀ ယ်သူအားကျေနပ်မှုရှိစေရန်သေချာစေရန်, Huawei သည်နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုကို Agate Red နှင့် Topaz Blue ဟုခေါ်သည့်အလွန်ပျော်စရာကောင်းသော၊ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းနှင့်နွေ ဦး ရာသီအရောင်နှစ်မျိုးဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။Space Grey, Moonlight Silver, Champagne Gold, Mocha Brown, Ceramic White, Black နှင့် Obsidian Black ရွေးချယ်စရာများအပြင်မကြာသေးမီကမှစတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သောအပြီးသတ်မှုများအပြင်။
သင်သည်ဤလှပသောအရောင်မျိုးစုံဖြင့် Huawei Mate9ကိုဝယ်မည်လော၊ သို့မဟုတ်လအနည်းငယ်အတွင်းတင်ဆက်နိုင်မည်ဟုခန့်မှန်းနိုင်သည့် Huawei Mate 10 အသစ်ကိုစတင်ရန်စောင့်ဆိုင်းမည်လော။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Huawei » Huawei သည် Mate9ကိုမူလအရောင်သစ်နှစ်မျိုးဖြင့်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်
Google Phone သည် Paw Mode အသစ်ကိုဖုံးကွယ်ထားသည်